शीर्षकमा बाइबल पदहरू: सेक्स -> जीवन
२ कोरिन्थी १२:२१
मलाई डर लाग्‍छ, कि म फेरि आउँदा मेरा परमेश्‍वरले मलाई तिमीहरूका सामुन्‍ने होच्‍याइदिनुहुनेछ, र धेरै जनाका निम्‍ति मैले शोक गर्नुपर्नेछ, जुनहरूले अघि पाप गरेका थिए, र आफूले गरेका अशुद्धता, व्‍यभिचार र छाडापनबाट पश्‍चात्ताप गरेका छैनन्‌ होला।
तर तिमीहरूका बीचमा व्‍यभिचार र सारा अशुद्धता अथवा लोभको नाउँसमेत नलिइओस्, जो सन्‍तहरूका बीचमा हुन सुहाउँदैन।
जे भए पनि तिमीहरू हरेकले आफ्‍नी पत्‍नीलाई आफैलाई झैँ प्रेम गर, र पत्‍नीले पनि आफ्‍ना पतिको आदर गरोस्‌।
पापमय स्‍वभावका कामहरू प्रत्‍यक्ष छन्, जो यी नै हुन्‌— व्‍यभिचार, अपवित्रता, लम्‍पटपना,
सबैका बीचमा विवाहचाहिँ आदरणीय होस्, वैवाहिक सम्‍बन्‍ध नबिटुलिओस्, किनकि दुराचारी र व्‍यभिचारीहरूको इन्‍साफ परमेश्‍वरले गर्नुहुन्‍छ।
अधर्मीहरू परमेश्‍वरका राज्‍यको हकदार हुँदैनन्‌ भन्‍ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? धोका नखाओ— अनैतिकहरू, मूर्तिपूजकहरू, व्‍यभिचारीहरू, समलिङ्गीहरू, पुरुषगामीहरू,
१ कोरिन्थी ६:१८
व्‍यभिचारदेखि अलग बस। अरू जुनसुकै पाप जो मानिसले गर्दछ, त्‍यो शरीरबाट बाहिर हुन्‍छ, तर व्‍यभिचार गर्ने मानिसले आफ्‍नै शरीरको विरुद्धमा पाप गर्दछ।
यदि हामीले आफ्‍ना पापहरू स्‍वीकार गर्‍यौं भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्‍छ, र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्‍छ, किनकि उहाँ विश्‍वासयोग्‍य र धर्मी हुनुहुन्‍छ।
तर म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, जसले कोही स्‍त्रीलाई कामवासनाको इच्‍छाले हेर्दछ, त्‍यसले अघिबाटै आफ्‍नो हृदयमा त्‍यससँग व्‍यभिचार गरिसकेको हुन्‍छ।
 लोभ, दुष्‍टता, छल, छाडापन, ईर्ष्‍या, निन्‍दा, घमण्‍ड, मूर्खता निस्‍कन्‍छन्‌। यी सबै दुष्‍ट कुराहरू भित्रबाट निस्‍कन्‍छन्, र मानिसलाई अशुद्ध पार्छन्‌।
१ थिस्सलोनिकी ४:३-५
 किनकि परमेश्‍वरको इच्‍छा जो तिमीहरूको पवित्रकरण पनि हो, सो यो हो कि तिमीहरू व्‍यभिचारबाट अलग बस। पवित्रता र आदरसाथ आफ्‍नो निम्‍ति पत्‍नी लिनू, सो तिमीहरू प्रत्‍येकले जान, तर परमेश्‍वरलाई नचिन्‍ने अविश्‍वासीहरूजस्‍तै कामुकताको कुवासनामा नबस।
 तर सृष्‍टिको आरम्‍भदेखि परमेश्‍वरले तिनीहरूलाई नर र नारी गरी बनाउनुभयो। ‘यसैकारण मानिस आफ्‍ना बुबा र आमालाई छोड़ेर आफ्‍नी पत्नीसँग मिलिरहन्‍छ, र ती दुई जना एउटै शरीर हुनेछन्‌।’ तिनीहरू फेरि दुई होइनन्, तर एउटै शरीर हुन्‍छन्‌। यसकारण परमेश्‍वरले जसलाई एकसाथ जोड्नुभएको छ, मानिसले नछुट्ट्याओस्‌।”
 आफ्‍नै कुण्‍डको पानी, र आफ्‍नै कूवाबाट बगेको पानी पी। के तेरो कूवाको पानी सड़कतिर, र तेरो खोलाको पानी बजारहरूतिर बग्‍न दिने? त्‍यो तेरै निम्‍ति मात्र होस्‌। पराई त्‍यसको हिस्‍सेदार पटक्‍कै हुन नपाओस्‌ तेरो फुहारा आशीर्वादी होस्, र तेरो युवावास्‍थाकी पत्‍नीसित तँ आनन्‍दित हो। मयालु मृगी र राम्री हरिणीझैँ, त्‍यसकै स्‍तनमा तँ सन्‍तुष्‍ट बन्, तँ सधैँ त्‍यसकै प्रेममा मोहित भइरहेस्‌।
सुलेमानको गीत ७:६-१२
 तिमी कति सुन्‍दरी र मनोहर छ्यौ, हे प्रिय, तिम्रो आनन्‍दमा! तिम्रो शरीरको कद खजूरको रूखजस्‍तै, र तिम्रा स्‍तनहरू फलका झुप्‍पाझैँ छन्‌। मैले भनें, “म खजूरको रूखमा चढ्‌नेछु, र यसका फल समात्‍नेछु।” तिम्रा स्‍तनहरू दाखका झुप्‍पाहरूजस्‍तै, तिम्रो सासको बास्‍ना स्‍याउको सुगन्‍धझैँ, र तिम्रो मुख उत्तम दाखमद्यजस्‍तै होऊन्‌। ओठ र दाँतबाट भएर बिस्‍तारै बग्‍दै दाखमद्य सीधै मेरा प्रेमीकहाँ पुगोस्‌। म मेरा प्रेमीकी हुँ, र उहाँको तृष्‍णा मेरै निम्‍ति छ। आउनुहोस्, मेरा प्रेमी, खेतबारी हुँदो डुल्‍न जाऔं, र राती गाउँतिर वास बसौं। हामी बिहानै दाखबारीमा जाऔं, दाखमा कोपिला लागेर फक्रेका छन्‌ कि, र दारिमहरूका फूल लागेछन्‌ कि हेरौं— त्‍यहाँ म तपाईंलाई मेरो प्रेम दिनेछु।
१ कोरिन्थी ६:१३-२०
 “भोजन पेटको निम्‍ति, र पेट भोजनको निम्‍ति हो।” तर परमेश्‍वरले दुवैलाई नाश गर्नुहुनेछ। शरीर व्‍यभिचारको निम्‍ति होइन, तर प्रभुको निम्‍ति हो, र प्रभु शरीरको निम्‍ति हुनुहुन्‍छ। परमेश्‍वरले आफ्‍नो शक्तिले प्रभुलाई जीवित पार्नुभयो, र हामीलाई पनि उहाँको शक्तिद्वारा जीवित पार्नुहुनेछ। तिमीहरूका शरीर ख्रीष्‍टका अङ्गहरू हुन्‌ भन्‍ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? त के म ख्रीष्‍टका अङ्गहरू लिएर तिनलाई वेश्‍याका अशुद्ध अङ्ग तुल्‍याऊँ? यो कदापि नहोस्‌! वेश्‍यासँग जोडिने मानिस शरीरमा त्‍यससँग एक हुन्‍छ भन्‍ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? किनकि यस्‍तो लेखिएको छ, “ती दुवै एउटै शरीर हुनेछन्‌।” तर जो प्रभुसँग एक हुन्‍छ, त्‍यो उहाँसँग आत्‍मामा एउटै हुनेछ। व्‍यभिचारदेखि अलग बस। अरू जुनसुकै पाप जो मानिसले गर्दछ, त्‍यो शरीरबाट बाहिर हुन्‍छ, तर व्‍यभिचार गर्ने मानिसले आफ्‍नै शरीरको विरुद्धमा पाप गर्दछ। तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्‍माको मन्‍दिर हो, जुन पवित्र आत्‍मा तिमीहरूले परमेश्‍वरबाट पाएका छौ, र उहाँ तिमीहरूभित्र वास गर्नुहुन्‍छ भन्‍ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू स्‍वयम्‌ आफ्‍नै होइनौ। तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हौ। यसकारण तिमीहरूका शरीरमा परमेश्‍वरको महिमा गर।